Ny fitaoman'ny Sputtering dia mikendry ny fahadiovana sy ny fitoviana ara-nofo amin'ny famokarana firakotra lehibe
Ny tonian-dahatsoratry ny firakotra ny fitaovana kendrena dia efa voalaza tetsy aloha, amin'ny fizotran'ny sputtering, ny kalitaon'ny fitaovana kendrena dia avo kokoa noho ny indostrian'ny fitaovana nentin-drazana..Ao amin'ity lahatsoratra ity, ny tonian-dahatsoratra dia hanohy hampiditra ny fiantraikan'ny fahadiovana sy ny fitoviana ara-nofo amin'ny zavatra kendrena amin'ny firakotra lehibe. Tongava mianatra momba azy ~
Ny fahadiovan'ny fitaovana kendrena mandrora dia misy fiatraikany lehibe kokoa amin'ny fampisehoana ilay horonantsary ho rakotra., raha tsy ampy ny fahadiovan'ny fitaovana kendrena, ny sombin-javatra maloto ao anaty fitaovana kendrena dia hanaraka ny tampon'ny vera mandritra ny fizotran'ny fikorianan'ny herinaratra sy ny sahan'andriamby. Miseho mafy ny fisarahana fisarahana, avo kokoa ny fahadiovan'ny tanjona kendrena, ny tsara kokoa ny fampisehoana ny horonan-tsary napetraka.
Ho an'ny tanjona tsy dia tsara fitondra-hafanana, toy ny lasibatra SiA1, ny fisian'ny loto ao anaty lasibatra matetika dia miteraka fanakanana ny famindrana hafanana, na ny tsy fitoviana eo amin'ny mari-pana amin'ny rano mangatsiaka ampiasaina amin'ny famokarana sy ny mari-pana amin'ny rano manarona, Sns, mahatonga ny tanjona ho vaky mandritra ny fampiasana. Ny triatra madinidinika dia tsy hisy fiatraikany lehibe amin'ny famokarana palitao, rehefa misy triatra miharihary ao amin'ilay fitaovana kendrena, ny fiampangana dia tena mora ny mifantoka amin'ny sisin'ny ampahany mitresaka, izay hiteraka fivoahana tsy ara-dalàna eo amin'ny faritra kendrena..Ny fisehoan-javatra famoahana dia hiteraka fianjeran-kotrana, fananganana sarimihetsika tsy mahazatra, ary nitombo ny fakana vokatra. Noho izany, eo am-panomanana ny tanjona, ankoatry ny fifehezana ny fahadiovana, ny fepetra fizotry ny fanomanana dia tokony hofehezina ihany koa.
Ho an'ny lasibatra firaka, matetika ny fizarana fitaovana tsy mitovy, toy ny fanangonana aluminium ao amin'ny lasibatra SiAl, fisarahana ny aliminioma amin'ny lasibatra zinc-aluminium (ny faobe atomika ny alimo dia 27 latsaky ny atin'ny atomika ny zinc 65, ary ny alimina dia mihatsara mandritra ny fizotran'ny fihenan-tsakafo aorian'ny fandatsahana azy. Hisavoana, miteraka votoatin'ny alimina avo amin'ny lafiny iray ary ambany amin'ny lafiny iray).Noho ny teboka miempo ambany, ny Alika mitambatra ao amin'ny kendrena SiA1 dia mora mitroka mandritra ny fizotry ny fananganana sarimihetsika mihetsiketsika, ary ny habetsaky ny A1 nampiana nandritra ny fizotran'ny famafazana dia azo antoka. Rehefa misy ny ampahany amin'ny agglomeration, manondro izany fa kely kokoa ny atin'ny aliminioma any amin'ny toerana hafa, izay misy fiatraikany amin'ny lasibatra SiA1. Ny fitarihana hafanana sy ny fitarihana herinaratra an'ny sarimihetsika, ka miteraka taham-piteny tsy mifanaraka, tsy fitoviana amin'ny sarimihetsika, famakiana ny fitaovana kendrena, manimba ny fisehoan'ny famoahana kendrena, ary koa mampihena ny kalitaon'ny fananganana sarimihetsika (fanamiana sarimihetsika) sy ny firafitry ny sarimihetsika. Noho izany, ankoatry ny fifehezana ny fahadiovan'ny fitaovana kendrena, ny fizarana ny fitaovana ao amin'ny kendrena firaka dia tena manandanja ihany koa.
Précédent: Fa maninona no milatsaka ny sarimihetsika vokatra mandritra ny firakofana vakum ？？
Manaraka: Ahoana ny fiantraikan'ny hakitroky sy ny porimozin'ny zavatra kendrena amin'ny kalitaon'ny coating